Zvigadzirwa Vatengesi & Fekitori | China Zvigadzirwa Vagadziri
Rexroth akateedzana Hydraulic pombi zvikamu
Elephant Fluid Power: Ipai Rexroth akateedzana Hydraulic pombi zvikamu, zvepakutanga OEM pombi zvikamu uye anobatsira fekitori pombi zvikamu.
Elephant Fluid Power: vimbisa mhando uye yakakodzera mitengo, uye yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi.
Parizvino, Anonyanya kufarirwa maBrands muHydraulics ndiDanfoss, Char Lynn, M + S, HANJIU, imwe neimwe iine hunhu hwayo, zvisinei chikonzero nei vazhinji uye vatengi vachisarudza HANJIU imo nekuti ine zvimiro zviri pachena pamusoro pezvimwe zvigadzirwa maererano nekutakura, sevhisi, mhando uye purofiti chiyero.
Yakaderera kumhanya yakakwira torque mota
Hydraulic inotenderera mota
Isu mumiririri uye tinogovera inozivikanwa yepasi rose brand "HANJIU" hydraulic mota.
HANJIU akateedzana hydraulic Orbitrol yekufambisa control unit
Kusanganisira yakavhenganiswa vharuvhu (yekuyamura vharafu uye yekutarisa isina vharuvhu), Tsiva Danfoss (ospc), M + S (HKU / 4) akateedzana.
Nzou Fluid Power inopa Caterpillar pombi zvishongedzo nezvakanakira mutengo unonzwisisika, kuendesa nekukurumidza uye mhando oem.
A2FE160 180 pisitoni pombi yekuisa zvikamu Zvikuru Kutakura T7FC070, Elephant Fluid Power inopa hydraulic piston pombi mabheyari, ekutanga mabheyari, mutengo unonzwisisika, uye uchaendeswa mukati memazuva mashanu.